Xog: Mareykanka oo soo faro-geliyey xiisadda PSF iyo Saciid Deni oo amar la siiyey | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xog: Mareykanka oo soo faro-geliyey xiisadda PSF iyo Saciid Deni oo amar...
Xog: Mareykanka oo soo faro-geliyey xiisadda PSF iyo Saciid Deni oo amar la siiyey
Muqdisho (Dalkaan.com) – Dowladda Mareykanka ayaa soo faro-gelisay xiisadda ka dhex-oogan maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ee Puntland iyo agaasimihii hore ee ciidamada PSF Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano, sida ay ogaatay Dalkaan.com.
Ciidamada PSF ayaa waxaa tababara Mareykanka, si ay ula dagaalamaan argagixisada, taasi oo ka dhigan in Mareykanka ay aad u daneynayaan arrintan, kuna qasbanaadeen inay soo faro-geliyaan.
Sida aan xogta ku helnay, safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ka walaacsan in xiisaddan ay horseedi karto dagaal ka qarxa magaalada Boosaaso, taasi oo weecin karta dagaalkii lagula jiray kooxaha argagixisada.
Diblomaasi sare oo Mareykan ah oo Muqdisho ku sugan ayaa sheegay in sii-hayaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho Colleen Crenwelge ay labo jeer la hadashay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, iyadoo ku amartay inuu xal aan xabbad aheyn u helo xiisaddan.
“Guud ahaan waxaan ku boorrinaynaa in ciidamada nooc kasta oo ka mid ah Soomaaliya ay ka waantoobaan ku lug lahaanshaha siyaasadda. Waxaan ku boorrineynaa dhammaan ciidamada ammaanka inay diiradda saaraan la dagaallanka ururada xagjirka ah ee rabshadaha sida al-Shabaab iyo Daacish-Soomaaliya,” ayuu yiri diblomaasiga Mareykanka ah.
Dhinaca kale, wada-hadallo u socda maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo agaasimihii hore ee ciidamada PSF Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano ayaa meel wanaagsan maraya, waxaana laga rajo qabaa in heshiis lagu gaaro.
Qodobka 20aad ee dastuurka Soomaaliya oo awood ciidan looga dhaqan-galiyay Muqdisho.
Khudbadii kheyre Iyo Beenta uu Doonayo Inuu madaxweyne ku noqdo, Fashilka...
Paul Pogba oo ka hadlay Heshiiska Cusub ee Manchester United iyo...
Deg deg Xogta Weerarkii xalay ka dhacay Muqdisho, Farmaajo oo...
Soomaaliya oo diiday in la baaro tacadiyada xuquuqada aadanaha ee ITOOBIYA
QISADEEDII OO DHAMAYSTIRAN IYO BAADI GOOBKII GABADHII AAN RAADINAYAY!!
ROOBLE oo eryey xubno ka tirsanaa FEIT soona saaray amar ku...